IPL : प्लेअफ पुग्न हैदरावाद र राजस्थानको संघर्ष – WicketNepal
IPL : प्लेअफ पुग्न हैदरावाद र राजस्थानको संघर्ष
Sakar Sedhain, २०७७ कार्तिक ६, बिहीबार १२:३२
युएईमा जारी १३ औं संस्करणको आईपिएल अन्तर्गत बिहिवार ४० औं खेलमा स्टिभ स्मिथ कप्तानिको राजस्थान रोयल्स र डेभिड वार्नर कप्तानिको सनराइजर्स हैंदरावादबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समय रातीको ७:४५ बजे दुबई स्थित दुबई अन्तरास्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा सुरु हुनेछ।
यस अघि ९ खेलमा ४ जित र ५ हारपछि ८ अंक बटुल्दै राजस्थान अंकतालिकाको छैटौं स्थानमा छ। यस्तै, समान ९ खेलमा ६ अंक बटुल्दै हैदरावाद सातौं स्थानमा छ।
पछिल्लो भेट : लिग अन्तर्गत २६ औं खेलमा यी दुई टोलिबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो जसमा राजस्थान ५ विकेटले विजयी भएको थियो। पहिले ब्याटिंग गरेको हैदरावादले १५९ रनको विजयी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो जुन पछ्याउने क्रममा राजस्थानले राहुल तेवतिया र रियान परागको सम्हालिएको ब्याटिंगको मद्दतमा जित हात पारेको थियो।
हेड टु हेड : हालसम्म यी दुई टोलिबीच १२ पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ। दुबै टिमले समान ६-६ पटक जित हात पारेका छन्।
राजस्थान : सुरुवाती २ खेलमा जित हात पारेको राजस्थानले पछिल्लो ७ खेलमा मात्र २ जित निकाल्न सकेको छ। सुरुवाती २ खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका सन्जु स्यामसनले निरन्तरता दिन नसक्दा टिम चुक्न पुगेको छ। स्मिथले सम्हालेको ब्याटिंग गर्दै फर्मलाई निरन्तरता दिएका छन्। जोस बट्लरको प्रदर्शन खास रहेको छ जसले पछिल्लो खेलमा चेन्नाई विरुद्ध उत्कृष्ट पारी खेलेका थिए। तर, ओपनिंग ब्याट्सम्यान बट्लरलाई मिडल अर्डरमा धकलेर नियमित मिडल अर्डर ब्याट्सम्यान बेन स्टोक्सलाई ओपनिंगको जिम्मेवारी दिइएको छ। राहुल तेवतियाको प्रदर्शन केहि खेलमा अदभूत रहेको छ जसले राजस्थानको जितमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन्। युवा खेलाडी रियान परागले पाएको मौका सदुपयोग गरेता पनि धेरै मौका पाउन सकेका छैनन्।
राजस्थानको बलिंगतर्फ जोफ्रा आर्चरले घातक बलिंग गरेका छन् जुन क्रममा १३ विकेट लिंदै सर्वाध्क विकेटकर्ताको सूचीमा शिर्ष-५ भित्र रहेका छन्। स्पिनद्वय श्रेयस गोपाल र राहुल तेवतियाले सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेका छन्। युवा फास्ट बलर कार्तिक त्यागीले प्रभाव देखाइरहेका छन्।
हैदरावाद : पछिल्लो खेलमा कोलकाता विरुद्ध सुपर ओभरमा पराजित भएको हैदरावाद प्रदर्शनमा स्थिरता चाहन्छ। ओपनरद्वय जोनी बेयरस्टो र कप्तान डेभिड वार्नर राम्रो लयमा रहेका छन्। वार्नरले सुस्त ब्याटिंग गर्दै हैदरावादको पारी सम्हालेता पनि त्यसको फाइदा उठाउदै विशाल योगफलतर्फ डोर्याउन मिडल अर्डरमा आक्रामक ब्याट्सम्यानको कमी देखिएको छ। मनिष पाण्डेले पाएको सुरुवातलाई ठूलो स्कोरमा परिणत गर्नुपर्नेछ। लयमा रहेका केन विलियमसनले मिडल अर्डर सम्हालेता पनि उनले राम्रो साथ पाउन सकेका छैनन्। प्रियम गर्ग र विजय शंखरले प्रदर्शनमा परिपक्वता ल्याउनु आवश्यक छ। डेभिड वार्नर, केन विलियमसन र मनिष पाण्डेले जिम्मेवारीपूर्वक ब्याटिंग गर्नुपर्ने छ।
बलिंगतर्फ भेट्रान तिव्र गतिका बलर भुवनेश्वर कुमारको अनुपस्थिती रहेता पनि खलिल अहमद, सन्दिप शर्मा र टि नटराजनले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। राशिद खान उत्कृस्ट लयमा छन् जसले ९ खेलमा ११ विकेट लिंदा मात्र ५.५२ रन प्रतिओभर रन खर्चेका छन्। किफायती बलिंगसंगै महत्त्वपूर्ण विकेट लिएका राशिदले विपक्षी टोलिको मिडल अर्डरमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडल ओभरमा राशिदको साथ दिन गुणस्तरीय भारतिय स्पिनरको कमि रहेको देखिन्छ। नटराजनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्।
दुबै टिममा हुन सक्ने परिवर्तन :
राजस्थान : पछिल्लो खेलमा मात्र १ ओभर गरेका अंकित राजपुतको स्थानमा वरुन अरुनले मौका पाउन सक्छन्। अन्यथा टिमले अन्य परिवर्तन गर्न चाहदैन।
राजस्थानको सम्भावित ११ : रोबिन उथप्पा, जोस बटलर ( विकेटकिपर ), सन्जु स्यामसन, स्टिभ स्मिथ ( कप्तान ), राहुल तेवतिया, रियान पराग, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, अंकित राजपुत/वरुन एरोन, कार्तिक त्यागि
हैदरावाद : कोलकाता विरुद्ध सुपर ओभरमा पराजित भएको हैदरावादले चोटिल केन विलियमसनको स्थानमा मोहम्मद नावीलाई स्थान दिनसक्छ। टिमसंग जेसन होल्डर जस्तो फास्ट बलिंग अल-राउण्डरको विकल्प रहेको छ। अन्यथा टिमले अन्य परिवर्तन गर्न जरुरी छैन। विजय शंखरले पछिल्लो खेलमा ४ ओभर बलिंग गर्दा कप्तानसंग प्रशस्त बलिंग विकल्प छ। टिमले बसिल थम्पीको स्थानमा पुनः खलिल अहमदलाई मौका दिनसक्छ।
हैदरावादको सम्भावित ११ : डेभिड वार्नर ( कप्तान ), जोनी बेयरस्टो ( विकेटकिपर ), मनिष पाण्डे, केन विलियमसन/मोहम्मद नावी/जेसन होल्डर, प्रियम गर्ग, विजय शंखर, अब्दुल समद, राशिद खान, सन्दिप शर्मा, बसिल थम्पी/खलिल अहमद, टि नटराजन
१. हैदरावादले लिगमा कुनै पनि खेल लक्ष्य पछ्याएर जित्न सकेको छैन। पहिले बलिंग गर्दा टिम ४ वटै खेलमा पराजित भएको थियो।
२.लिगमा २५०० रन बनाउनबाट सन्जु स्यामसन ५५ रन टाढा छन्।
३. लिगमा १०० विकेट हात पार्नबाट सन्दिप शर्मा मात्र १ विकेट टाढा छन्।
४. टि-२० क्रिकेटमा १०० छक्का पुरा गर्न स्टिभ स्मिथ १ छक्का टाढा छन्।